Ukubuyekezwa kwencwadi yamanga
Ukubuyekezwa kwezincwadi eziqanjiwe kanye nokuhlaziywa
Ubani othe uhlobo lwe-adventure lufile? Bekuyindaba nje yombhali ofana noLuis Montero esondela kuyo ngokuthinta kwakhe izinsolo ukuze sonke sicabange kabusha ukuthi kuncane okusele esingakuthola kulo mhlaba nokuthi yini okufanele siyenze. Kukhona njalo…
I-Lazarillo de Tormes, indaba encane enhle
Iqiniso lokuthi iyinoveli engaziwa kungenzeka likhulule umbhali wayo ekubuyekezweni kafushane nasekuhlolweni kwesikhathi sakhe. Ngoba eyanyatheliswa emuva ngo-1554, "Impilo kaLazarillo de Tormes ingcebo nezinsizi zakhe", njengoba ibizwa kanjalo esihlokweni sayo esigcwele, yayi...
Inoveli ye-adventure eza kithi ngaphansi kwegama mbumbulu lika-Alejandro Bosch, mhlawumbe ukuze igcine iqedele lelo phuzu eliyimfihlakalo eligcwala itulo. Ngoba indaba isuka engxenyeni yayo kazibuthe yanoma iyiphi i-adventure esekelwe empicabadala yomlando. Kwethulwa umcimbi ngemibala ecebile ne...
Amazwi esiwaphathisa emoyeni, nguLaura Imai Messina
Ukufa kushintshwa lapho kungeyona indlela efanele yokuphuma endaweni yesigameko. Ngoba ukushiya lo mhlaba kusula yonke iminonjana yenkumbulo. Okungakaze kube ngokwemvelo ngokuphelele ukufa kwalowo othandekayo owayehlale ekhona, ngisho nangaphansi kwenhlekelele ephelele. Ukulahlekelwa okungalindelekile kakhulu...
Sekuyisikhathi eside usizi lwenhliziyo lwashiya i-romanticism ukuze wenze i-aphoyintimenti kudokotela wezengqondo, njengendodana yawo wonke umakhelwane. Ukulandisa lokho kuphuka kwenhliziyo okuluhlaza kuthatha esinye isici ezandleni zika-Daria Bignardi. Ngoba kumayelana nokukhumula usizi ukuthi bakushiye bodwa ngaphambi kwe-Universe ukuthi ...
Ikhasi1 Ikhasi2 ... Ikhasi98 Okulandelayo →